ချစ်သူလေးရဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ထွန်းထွန်း
ထွန်းထွန်းရဲ့ လက်ရှိအချစ်ရေးက ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားလေးပါ.အနာဂတ်မှာ အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်လာ ဖို့ အတွက်လည်း သူကိုယ်တိုင် ကြိုးစားနေတယ်တဲ့.
Photo : ဆုစန္ဒီဦး FB
ထွန်းထွန်း ရဲ့ လက်ရှိအချစ်ရေးကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်း နဲ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး ဆုစန္ဒီဦး တို့က ချစ်သူ သက်တမ်း တစ်နှစ်နဲ့ လေးလ ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အခုလည်း အလိုက်သိလွန်းတဲ့ ချစ်သူလေးကြောင့် အရမ်းကို ပျော်လို့နေပါတယ်။ ခရီးက ပြန်လာတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးက သူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ဝယ်လာလို့ ပျော်နေတာပါ။
ဟဲဟဲ ခရီးကအပြန် လက်ဆောင်လေးတွေ ဝယ်လာပေးတယ် ချစ်သူလေးက ♥️
စားချင်တာလေး ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ပါလို့ပျော်တယ် ?
ဦးထုပ်လေးကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ?
ကျေနပ်တယ် ချစ်တယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စက်တင်ဘာ(၂၁) ရက်နေ့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Photo : ထွန်းထွန်း FB